Big City Small World (Series 1 Episode9- Aaagghhh...My Injured Leg!) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on August 31, 2012 at 10:40 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series 1 Episode9- Aaagghhh...My Injured Leg! ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Series 1 Episode9- Aaagghhh...My Injured Leg! (အတွဲ (၁)၊ အပိုင်း (၉) – အား... ငါ့ရဲ့ဒါဏ်ရာရနေတဲ့ ခြေထောက်!)
Interview advice from poor Johnny the injured footballer. Written by Chris Rose.
လူတွေ့စစ်ဆေးပွဲဖြေရန်အတွက် ဒါဏ်ရာရနေသော ဘောလုံးသမား Johnnyထံမှ အကြံဥာဏ်များ။ Chris Rose ရေးသားသည်။
အေးပါ၊ အေးပါ… ငါလည်းကြိုးစားနေပါတယ်။ မင်းက လေးတာကိုး!
သူ့ရဲ့ ချိုင်းထောက်လိုလိမ့်မယ်... ခဏလေး... ရော... အိုကေ... အခုမင်းထိုင်လို့ရပြီလား?
Johnny! နင့်ခြေထောက်ကို နင်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ?
Johnny: Sporting injury.
Sarah: Oh no! What happened?
အင်း။ ငါတို့က ဘောလုံးကစားနေတာလေ… ငါရယ် ကောင်တွေရယ်…
ပြီးတော့ ငါက မန်ချက်စတာစီးတီးက ဆွန်ဂျီဟိုင်လေ
ငါကတော့ ချယ်ဆီးက ဒရော့ဘာပေါ့...
ပြီးတော့ ငါကတော့ ဒေဗစ်ဘက်ခမ်းပေါ့...
အဲ့ဒီတော့ နင်တို့က ဘောလုံးကစားရင်းနဲ့ Johnny က ဒါဏ်ရာရသွားတယ်ပေါ့?
တစ်ယောက်ယောက်က သူ့ကို ကန်လိုက်တာလား?
Sarah: Did he fall over?
Harry: Not exactly...
Olivia: Well what happened then?
တကယ်တော့ အဲ့ဒါက အားကစားလုပ်ရင်းရတဲ့ ဒါဏ်ရာမဟုတ်ဘူး…
Sarah: Go on!
Johnny: It was kind ofasporting injury...
အဲ့ဒါက အားကစား ဒါဏ်ရာ တစ်မျိုးပါပဲ…
ဒါပေမယ့် ငါတို့ဘောလုံးကိုတော့ အပြီးထိ ကစားခဲ့သားပဲ...
ပြီးတော့ ငါ့တို့ ဘီယာဆိုင်သွားပြီးသောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်လေ...
ပြီးတော့ ငါတို့ အဲ့ဒီကို လမ်းလျှောက်နေရင်းပဲ...
ဟင်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ ဟိုမှာ Magda လာပြီ၊ အနည်းဆုံးတော့ သူက ငါ့ကို စာနာမှုပေးနိုင်မှာပါ... မင်္ဂလာပါ Magda!
မင်္ဂလာပါ Johnny... အလိုလေး! နင့်ခြေထောက်ဘာဖြစ်သွားတာလဲ?
ပြောရင် အရှည်ကြီးပဲ... မပြောချင်တော့ဘူး...
တကယ်ပါ Magda နင်မသိလေ ကောင်းလေပဲ။
မမေးစမ်းပါနဲ့! နောက်မှငါတို့ပြောပြမယ်... စိတ်မပူနဲ့!
အာ၊ အိုကေလေ… ရပါတယ်။ Johnny နားထောင် နင်ငါ့ကို လူတွေ့စစ်ဆေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတာ… နင်မှတ်မိလား? နောက်တစ်ပါတ်ဆိုရင် အရေးကြီးတဲ့ လူတွေ့စစ်ဆေးပွဲရှိလို့…
အိုး။ ရပါတယ်။ ငါမှတ်မိတာပေါ့။ ကောင်းတယ်။ ကောင်းတဲ့ အကြံဥာဏ်ပဲ – ငါနင့်ကို အကြံနည်းနည်းပေးမယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီဒါဏ်ရာကိုလည်း ငါခဏ မေ့ထားလို့ရတယ်။ အဲ့ဒီတော့ လူတွေ့စစ်ဆေးပွဲတွေ။ ကောင်းပြီ။ အရေးကြီးတာစပြောမယ် – နင် အ၀တ်အစားကို သေသေချာချာ စမတ်ကျကျဝတ်သွား။
အင်း.. ၀တ်စုံ ၀တ်သွားလေ… မီးခိုးရောင်ပေါ့…
Johnny: Yeah.you know the kind of thing, skirt andajacket...
အင်း၊ နင်သိပါတယ်ဟာ စကတ်နဲ့ ဂျက်ကက်လိုဟာမျိုးလေ…
အာ၊ ငါကတော့ အဲ့ဒါအမြဲမှန်တယ်မထင်ဘူးနော်... ကုမ္ပဏီပေါ်မူတည်မှာတော့ အသေအချာပဲ
ဒီလိုလေ၊ နင်က လူတိုင်း စမတ်ကျကျ ၀တ်စုံတွေဝတ်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီမျိုး ဆိုရင်တော့ ဟုတ်တယ်လေ နင်လည်း ၀တ်စုံဝတ်သွားသင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် နင်လျှောက်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီက လူတိုင်း ၀တ်စုံတွေ အချိန်ပြည့်ဝတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့…
သာမန်ဝတ်နေကျ အ၀တ်အစားမျိုးပဲဝတ်တဲ့ နေရာဆိုရင်...
အတိအကျပဲ... နင် အ၀တ်အစားဝတ်တာ အလွန်အကျွံဖြစ်မနေချင်လောက်ဘူးထင်တယ်...
နင်နဲ့ သင့်တော်မယ့် ပုံစံမျိုးပဲလိုအပ်တယ်!
ဟုတ်တယ်၊ အဲ့ဒါက ကောင်းတဲ့ အကြံပြုချက်ပဲ။ ဒါက ဒုတိယ အချက်။ ဒါပေမဲ့ နင် ပထမဆုံး လုပ်ရမှာက ကုမ္ပဏီ အကြောင်း လေ့လာထားပါ! ကုမ္ပဏီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နင်ရှာနိုင်သလောက်ရှာပါ! သူတို့ကိုပဲမေးခွန်းတွေပေးမမေးပါနဲ့…
အင်းမှန်တယ်။ – သူတို့က နင့်ကိုအမြဲတမ်း မေးခွန်းမေးဖို့ အခွင့်အရေးပေးတယ်လေ။ အဲ့ဒါဆိုရင် ဥာဏ်သုံးရတဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးပေါ့!
မေးခွန်း တစ်ခု နှစ်ခုဆို လုံလောက်ပါပြီ။ ဒီထက်တော့ မပိုသင့်ဘူး!
ဟုတ်တယ်။ နင် စိတ်ဝင်စားတဲ့လေသံပေါက်အောင် ပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားပုံပေါက်အောင်…
အတိအကျပဲ – စိတ်ဝင်စားပုံပေါက်အောင်နေပါ၊ ခန္ဓာကိုယ် ဘာသာစကား၊ အဲ့ဒါကလည်း အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ မေးခွန်းမေးတဲ့သူတွေကို သူတို့မျက်စိကို ကြည့်ဖို့ ။
ဒါပေမယ့် သူတို့ကို ငေးမနေနဲ့!
ဒါပေမယ့် နင့်ကိုယ်နင် ယုံကြည်မှုရှိကြောင်းပြပါ။ ပြီးတော့ နင်ဘာပြောနေလဲဆိုတာ နင်သိတယ်ဆိုတာကိုရောပေါ့...
အဲ့ဒါ ပြဿနာပဲ... ငါယုံကြည်မှုရှိပါ့မလားဆိုတာ ငါမသေချာဘုး!
အို ပြီးတော့ လူတွေ့စစ်ဆေးပွဲအတွက်နောက်မကျစေနဲ့! စောစောရောက်အောင်သွားဖို့ စီစဉ်ပါ
အကြံပြုချက်တွေအများကြီးပဲ။ တွေးဖို့လည်း အများကြီးပဲ... အဲ့ဒါငါ့ကိုပိုကြောက်အောင်လုပ်နေတယ်၊ ပိုလျော့အောင် မဟုတ်ဘူး!
စိတ်မပူပါနဲ့။ အဲ့ဒါလည်း အရေးကြီးတယ်။ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ပျော်ပျော်နေ! အဲ့ဒါဘာကြီးလဲ?
သြော် ငါနင်တို့ကို ပြောဖို့မေ့သွားတယ် – ငါ့တူလေး Joe က ဒီနေ့ဒီကို ထပ်ရောက်နေတယ်…
ငါ Joe ကိုမှတ်မိတယ်... သူက ဟိုဒင်းအမြဲလုပ်တဲ့ ကောင်လေး... အတိအကျပဲ!
Joe! ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့! ကျေးဇူးပြုပြီး ဂရုစိုက်ပါ!\_
Johnny: He’s sweet as long as he doesn’t come near my...aaaagghhhh!!!!...my injured leg!!
သူက ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ် ငါ့.. အား....!!! ဒါဏ်ရာရနေတဲ့ ခြေထောက်နားမလာသရွေ့ ပေါ့!!
Permalink Reply by Ann on September 28, 2012 at 13:31
Thank you so much! For all lesson in here.
Permalink Reply by thant zin tun on October 5, 2012 at 21:35
It's really nice post.Thanks
Permalink Reply by Angry Angel on October 8, 2012 at 11:56
Permalink Reply by Htoo on November 20, 2012 at 10:59